Iyiphi ezosifaka ku 2017 | News24
Iyiphi ezosifaka ku 2017
PHOTO:FACEBOOK UBabes woDumo naye ingoma yakhe eqokwe ohlwini lwezingase zihlukanise unyaka
INGABE uma libumbana ihora leshumi nambili mhlaka 31 kuDisemba iyiphi ingoma kulezi ebeziyintandokazi ngonyaka ka 2016 eyosifaka onyakeni omusha? Kulonyaka ubukeka umkhulu umthwalo wokukhetha ingoma esiyohlukanisa ngayo unyaka njengoba ziningi ezidla ubhedu kulesikhathi samanje.
Lokhu kwenza kube nzima ukuqagula ukuthi iyiphi kulezi ikakhulukazi ezisohlwini lwe-Top 10 emsakazweni uKhozi FM okuyiwona olalelwa kakhulu eyozishaya zonke emakhanda imuke nesicoco sokuba ingoma ka 2016.
Uma kuzokhethwa ingoma ezohlukanisa unyaka kuyaye kubhekwe kakhulu kweze-House neKwaito kodwa kuleminyaka edlule itshe seligaya ngomunye umhlathi njengoba nezikaMasikandi kanye neze Hip Hop sezingena kuloluhlu.
Nyakenye ingoma ehlukanise unyaka kube eyezinsizwa ezisakaza kuMetro FM uDJ Sphectacula no Naves lapho behambisana khona noProfessor ethi KOTWAnthem. Lengoma yayincintisana nezinye ezifana noShumaya yeDbn Nyts ft Zinhle Ngidi & Trademark, We Dance Again ka DJ Black Coffee kanye nezinye.
Abantu sebevele baqalile bayaphikisana ezinkundleni zokuxhumana kanye nasezindaweni zobumnandi ngengoma ekungenzeka ihlukanise unyaka. UKhozi FM selivele luzikhiphile izingoma ezisohlwini lwe-Top 10 ezingavotelwa abalaleli.
Ukukhishwa kwaloluhlu kunenge abanye abaculi abakhale ngokuthi bashiywe ngaphandle kodwa izingoma zabo zibe zenze kahle kulonyaka.
Phakathi kwezingoma ezibhekiwe kuKhozi FM kubalwa uBabes woDumo nge Wololo, UDr Malinga Akulaleki, Mroza Van Damme, Bucie ft Black Motion Rejoice, Durban’s Finest ft Professor Umsindo, Musa Mthande, Kwesta ft Cassper Nyovest Ngud’, Ricky Rick Sidlu Kotini, Mpumi Ngfike, African warriors ft Toshi Uyankenteza.
Uma wonke amavoti abalaleli esengenile kuyobe sekumenyezelwa leyo ezishaye zonke emakhanda kuqhathaniswe nendlela edlalwe ngayo kulomsakazi.